शंकरले यसरी फर्काए अम्बरलाई- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
शंकरले यसरी फर्काए अम्बरलाई
चैत्र २, २०७५ रमण घिमिरे
काठमाडौँ — शंकर लामिछाने र अम्बर गुरुङबीचको सम्बन्ध बुझ्न लामिछानेको ‘विम्ब–प्रतिविम्ब’ को अम्बर गुरुङ पढ्नुपर्छ  । लामिछानेको गुरुङप्रतिको आत्मीयता र उनको प्रतिभा यसमा झल्केको छ, ‘म अम्बर हुँ तिमी धर्ती, लाखौँ चाहे पनि हाम्रो मिलन कहिल्यै नहोला  ।
गुरुङलाई चिन्नुभन्दा धेरै वर्षअघि नै लामिछानेको कानमा यो गीत गुन्जिएको थियो । उनीहरू एकअर्कामा भौतिक रूपले अपरिचित थिए । तर, यस गीतका शब्द, सङ्गीत र गायनकलाले लामिछानेको हृदयलाई स्पर्श गर्‍यो । न्यानो तरंग चलायो । उनका आँखामा आकाश र धर्तीको मिलनभूमि क्षितिजको एक यस्तो सुन्दर दृश्य मौलायो, जसमा सूर्य डुब्दै थियो— यो सिद्ध गर्न मानौँ यो मिलनरेखा एक महाशून्य हो । ‘अम्बरको फ्यान म यसरी बनेँ ।’ शंकर लामिछानेले अम्बर गुरुङको कलाकारितालाई संक्षेपमा यसरी वर्णन गरेका छन् ।
यो मान्छे कस्तो छ ? लामिछानेले कवि भूपि शेरचनसँग अम्बरका बारे सोधेका थिए । अनि कवि भूपिले भनेका थिए, ‘ऊ मान्छे सायद होइन— ऊ मित्र हो, र जसका लागि मित्र होइन, उसका लागि कलाकार हो, र जसका लागि कलाकार होइन, उसका लागि गायक हो र जसका लागि ऊ गायक होइन, उसका लागि ऊ जन्मेको पनि छैन ।’
त्यतिबेला अम्बर गुरुङले शंकर लामिछानेलाई चिनेका थिए, थिएनन् थाहा छैन । तर लामिछानेका भनाइमा उनलाई अम्बरसँग पहिलो पटक परिचय गराइदिएका थिए कवि भूपिले । भूपिले परिचय गराउन नै अम्बरलाई लामिछानेको छाउनीको घरमा लिएर आएका थिए ।
त्यतिबेला गुरुङको ‘नौ लाख तारा’ ले नेपाल हल्लाएको थियो । तर त्यही गीत गाएका कारण भारतले भने अम्बरलाई दार्जिलिङमा हल्लाउन खोज्दै थियो । भारतभरि यो गीत प्रतिबन्धित भयो । भारतविरोधी गीत गायो भनेर उनलाई सार्वजनिक स्थलमा गाउनसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसपछिको कुरा गरेका हुन् लामिछानेले । जुन कार्यक्रम बडो गोप्य रूपमा अगमसिंह गिरीको आयोजनामा दार्जिलिङमा गरिएको थियो । विशेष अतिथि लामिछानेलाई बनाएर अम्बरले त्यस रात आफ्ना पुराना र नयाँ गीत गाएर छर्लङ्ग बिहान बनाएका थिए ।
त्यतिखेर तत्कालीन राजा महेन्द्रको जन्मोत्सवमा गरुङलाई गीत गाउन काठमाडौँ झिकाइएको थियो । उनले फोहोरा दरबारमा ‘नौलाख तारा’ गाउँदा राजा महेन्द्रका पनि आँखा रसाएको कुरा गरेका थिए एक पटक गीतकार रत्नशमशेर थापाले यस पंक्तिकारसँग । हो त्यही बेला हो भूपिका माध्यमले शंकर लामिछाने र अम्बर गुरुङबीच पहिलो साक्षात्कार भएको । तर त्यस भेटमा न गुरुङले साहित्यकार लामिछाने चिनेका थिए, न लामिछानेले गुरुङभित्रको कलाकार (‘नौ लाख तारा’ र ‘म अम्बर हुँ तिमी धर्ती’ बाहेक) बुझेका थिए । दार्जिलिङमा उनीहरूबीच दोस्रो भेट भयो । यस भेटले लामिछाने र गुरुङभित्रको प्रतिभालाई एकअर्काले नजिकबाट चिने । लामिछानेका तीनवटा गीतमा गुरुङले संगीत पनि गरे । यद्यपि ती गीतहरू प्रकाशमा आएनन् तर यी दुई प्रतिभाहरू प्रगाढ मित्रतामा बाँधिए । र त्यही भेटपछि अम्बर गुरुङले बिसाउन खोजेको संगीत आरोहमा पुगेर गुन्जिन थाल्यो ।
लामिछाने दार्जिलिङ पुग्दा त्यहाँ गुरुङ थिएनन् । अकस्मात एक साँझ गुरुङ लामिछानेलाई खोज्दै आइपुग्छन् । गुरुङलाई पनि सार्वजनिक स्थलमा गाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उनीहरू एउटा हलजस्तो एउटा साँघुरो कोठामा कवि अगमसिंह गिरीको पहलमा जम्मा हुन्छन् र झ्यालढोकामा चुकुल लगाएर कोठेगायन सुरु गर्छन् । त्यहीँ हो अम्बर गुरुङले शंकर लामिछानेको मन जितेको । ‘पहाड सुक्योजस्तो लाग्छ’ पहिलो पटक अम्बरले लामिछानेलाई सुनाएका थिए । त्यसपछि लामिछाने र गुरुङबबीचको सम्बन्ध यसरी झाँगियो कि यी दुई आ–आफ्ना क्षेत्रका हस्तीहरू वर्षौंअघि बिछोडिएर भेटिएका संगातीजस्ता हुन पुगे । हुन त गुरुङ लामिछानेलाई दाइ नै भनेर सम्बोधन गर्थे । तर एकअर्कालाई ‘ओल्ड म्यान’ भनेर सम्बोधन गर्थे । उनीहरूबीच गहिरो मित्रता थियो । यो मित्रता कति गहिरो थियो भन्ने कुरा एक पटक यस पंक्तिका लेखकसँग अम्बर गुरुङका चेला पिटर जे कार्थकले पनि बताएका थिए ।
शंकर लामिछाने पारिश्रमिक नलिई कसैलाई आफ्ना निबन्ध दिँदैनथे । कसैले उनीसँग पत्रिकामा छपाउन निबन्ध माग्यो भने लामिछाने भन्थे, ‘कति (रुपियाँ) को निबन्ध लेखिदिऊँ ! आफ्ना सिर्जनाको मोल आफैँ तोक्ने लामिछानेले गुरुङको अनुरोधमा पिटरको ‘प्रत्येक ठाउँ ः प्रत्येक मान्छे’ को भूमिका पनि लेखिदिएका थिए । तर पारिश्रमिकस्वरूप एक पैसा भने लिएरै छाडे । यो धेरैपछिको कुरा हो । अम्बर गुरुङ राजा महेन्द्रको आग्र्हमा काठमाडौँ बसाइँ सरिसकेका थिए र तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सङ्गीत विभागका निर्देशक भइसकेका थिए ।
योभन्दा धेरैअघिको कुरा । जतिखेर उनको ‘नौ लाख तारा’ प्रतिबन्धित भइसकेको थिएन तर उनी संगीतबाटै निराश भएर तरकारी खेती गर्न कालिम्पोङमा थिए । गीत गाएर घरलाई कन्चो दाम सहयोग गर्न सकेका थिएनन् । बाबुबाजे भारतीय सेनामा काम गरेर निवृत्त भई ‘पेन्सन’ थाप्दै सुखजिलो, सुबिस्ताको जीवन बाँचिरहेका थिए । उनीहरूको मानसिकतामा छोरो भने सेनामा नगई आयआर्जन नहुने सङ्गीतको मरुभूमिमा पानी खन्याइरहेको थियो । ‘नौ लाख तारा’ ले मान, प्रतिष्ठा र नाम त दियो तर दाम थिएन । विवाह भइसकेको थियो । श्रीमती र दुइटा छोराहरूको जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा थपिएको थियो । संगीत गर्नु, गाउनु भनेको दामबिनाको मिहिनत, त्यसेबला यो कुनै ‘काम’ थिएन । बरालिनु मात्र ठहर्थ्यो । त्यसैले उनी संगीतिक कर्मलाई खालि सोखका रूपमा कुनै चाडवाडहरूमा आयोजना हुने कार्यक्रममा मात्र गाउने निधो गरेर तरकारी खेतीमा लाग्ने निश्चयका साथ कालिम्पोङमा थिए ।
अम्बर गुरुङको यो सीमान्त उदासीमा एक दिन शंकर लामिछाने कालिम्पोङ झरे । लामिछाने कामविशेषले कोलकाता पुगेका थिए । त्यहीँबाट उनले गुरुङलाई तार पठाए– ‘तिम्रो मुड कस्तो छ ? फुर्सद भए म तिमीलाई भेट्न कालिम्पोङ आउँदै छु ।’ अम्बरले प्रत्युत्तर पठाए, ‘म तपाईंलाई बसस्ट्यान्डमा पर्खिरहनेछु ।’
एक दिन बिहानै यो पंक्तिकार अम्बर गुरुङको निवास महाराजगन्ज पुगेको थियो । माघ–फागुनको महिना थियो सायद । किनभने हामी बाहिर चउरमा कुर्सी राखेर घाम ताप्दै थियौँ । कुरैकुरामा उनले भने, ‘साँचो अर्थमा भन्ने हो भने मलाई संगीतमा फर्काएकै शंकर दाइले हो ।’ त्यस दिन उनले पुराना स्मृतिलाई कोट्याएका थिए । ‘नौ लाख तारा’ को जताततै चर्चा थियो तर दाम शून्य । उनले भनेका थिए, ‘त्यसपछि म ठक्कर खान थालेँ । २६/२७ वर्षको थिएँ, दुइटा सन्तानको बाबु भइसकेको थिएँ । गलामा माला भिरेर र दर्शकको ताली खाएको भरमा परिवारको गुजारा हुन सक्ने अवस्था थिएन । अनि मैले संगीतलाई एउटा सोखको रूपमा ‘साइड’ मा मात्र सीमित राख्ने र जीवनयापनका लागि सरकारी खेती गरेर होल सेल व्यापार गर्ने निश्चय गरिसकेको थिएँ ।’
हो, त्यसैबेला शंकर लामिछानेको तार आयो र उनी श्रीमान्/श्रीमती नै लामिछानेलाई लिन बसस्ट्यान्ड झरे । ‘म शंकर दाइलाई अत्यन्त आदर गर्थें,’ उनले भनेका थिए, ‘अनि हामीले उहाँलाई घर लिएर गयौँ ।’ घर पुग्नासाथ अम्बरलाई लामिछानेले सोधिहाले, ‘तिम्रो संगीतको हालचाल के छ त ?’ अनि उनले पनि आफ्नो मनमा लागेको कुरा फ्याट्टै भनिदिए, ‘दाइ अब मैले संगीतलाई सोखको रूपमा मात्र लिएर, यसो अवसर पर्दा मात्र गाउने, बजाउने निधो गरेको छु । व्यवसायका रूपमा चाहिँ अब तरकारी खेती गर्ने र त्यसैलाई बेचेर जीवन धान्ने निधो गरिसकेँ ।’
गुरुङको कालिम्पोङमा चार–पाँच रोपनी जग्गा थियो । खेतीपातीका लागि यति जग्गा प्रशस्त हुन्थ्यो । तरकारी ढुवानी गर्ने आफ्नै एउटा जिप पनि थियो । यति भए उनलाई यो व्यपारमा गर्न कुनै कठिनाइ थिएन ।
गुरुङको कुरा लामिछानेले बडो गम्भीरतापूर्वक सुने र यति मात्र भने, ‘तिम्रो यस कुराको उत्तर म एक–दुई दिनपछि दिन्छु ।’ त्यसको भोलिपल्ट उनीहरू दुवै जना दार्जिलिङ उक्लिए । सुरापान र संगीतका दुवै पारखी, दार्जिलिङ पुगेपछि एक–दुई दिन उनीहरू यसैमा रमाए । गुरुङले नयाँ–पुराना गीतहरू सुनाए लामिछानेलाई । दुवै प्रफुल्ल भए । त्यसबेला गुरुङलाई लागेको थियो शंकर दाइले कालिम्पोङमा ‘यसको उत्तर म एक–दुई दिनमा दिन्छु’ भन्ने कुरा नै बिर्सिए ।
तर, होइन रहेछ । लामिछानेले कालिम्पोङमा थाँती राखेको कुरा त्यहाँ कोट्याए । ‘तिमीले भनेको कुरा तिम्रो अवस्था र वातावरणलाई मनन गर्दा एकदमै सही छ । नेपाली समाज संगीतबाटै बाँच्न सक्ने अवस्थामा अझै पुगिसकेको छैन । कलाबाट कलाकार बाँच्न सक्तैन । तर तिमी तरकारी खेतीमै सफल हुन्छौ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? तिमीलाई खेतीपातीबारे के थाहा छ ? कुन याममा कुन तरकारी लगाउँदा फाइदा हुन्छ ? कुन माटोमा कुन तरकारी फस्टाउँछ ? तिमीले त माटो पनि चिनेका छैनौं । बीउबिजनबारे केही थाहा छैन । अनि कुन माटोमा कुन जातको खेती राम्रो हुन्छ भनेर अध्ययन गर्नमै तिमीलाई वर्षौं लाग्छ । यी कुरा बुझ्दाबुझ्दै तिम्रो अर्को आधा आयु बितिसक्छ । अनि तिमी किन यता हामफाल्छौ ?’ अनि उनले अम्बर गुरुङको पिठ्युँ थपथपाउँदै भने, ‘तिमी संगीत गर्न र गाउनका लागि नै जन्मिएका हौ । त्यसैले तिमीले संगीतबाहेक अर्को पेसा अपनाउनु नै अफापसिद्ध हुन्छ । तिमी संगीतमै लाग !’
त्यस बिहान अम्बर गुरुङले चियाको सुर्पी लिँदै भने, ‘शंकर दाइकै सुझावपछि हो, मैले पनि गहिरिएर सोचेँ— जसोतसो संगीतमा लागिहालेँ । मानिसले यति धेरै सम्मान दिइरहेका पनि छन् । अनि मैले त्यसउप्रान्त संगीतलाई आफ्नो मुख्य धर्म ठानेँ, यसप्रति नै आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेँ र निष्ठाका साथ लागेँ । त्यस दिन शंकर दाइ कालिम्पोङ नआएका भए, उनीसँग आफ्नो भविष्यबारे कुरा नउठाएको भए, म संगीतकार हुने थिएनँ । अरू नै केही हुन्थेँ होला तर म यो संगीतकार गीतकार, गायक अम्बर गुरुङ भने सायद हुने थिइनँ ।’ प्रकाशित : चैत्र २, २०७५ १२:२९
कानको खोजीमा कागको पछिपछि दौडिएका छिमेकीहरू आजसम्म घर फर्किएका छैनन् । उनीहरू कागको खोजीमा ब्रह्माण्डको परिक्रमा गरिरहेका छन् । रामदेवले छिमेकी नभएर खाली भएका घरमा नयाँ छिमेकी ल्याए र तिनलाई च्यवनप्रास बनाएर बिक्री गर्न थाले ।
चैत्र २, २०७५ नयनराज पाण्डे
काठमाडौँ — कान : पहिलो कथा
यो सामाजिक यथार्थवादी कथा हो । रुचि नहुनेले नपढेको राम्रो । यो कथामा समाज छ । समाजमा बसेका मनुवाहरू छन् । म छु । मेरा तेह्रदिने दाजुभाइ छन् । आफन्तहरू छन् । केहीलाई परार साल गोरु बेचेको थिएँ । तिनीहरू सबैसित पनि मेरो किनबेचको साइनो गाँसिइसकेको छ । त्यसैले यो मेरा इष्टमित्र र नातेदारहरूकै कथा हो । कथाका मुख्यपात्र एक जना मनुवा हुन् । सुविधाका लागि तिनलाई रामदेव सम्बोधन गर्न सकिन्छ । कथामा रामदेवलाई मूर्ख पनि बनाउन त सकिन्छ । बस्, अलिकति किबोर्डमा औंलाहरू यताउता गर्नु न हो । तर, त्यसो गर्दा कथाले रोचकता गुमाउने खतरा रहन्छ । त्यसैले कथामा उनलाई साह्रै चतुर प्राणीका रूपमा स्थापित गर्न यो कथाकार युगौंअघि श्रापित भइसकेको छ ।
रामदेवले अरूलाई भने मूर्ख ठान्थे । आइन्स्टाइनपछि आफ्नो दिमागको अत्यधिक प्रयोग गर्ने क्षमता आफूसित मात्र रहेको उनको निजी ठहर थियो । अरूका विचारहरूको खिसी उडाउँथे । अरूलाई मान्छे नै गन्दैनथे । मै राम्रो, मै ठूलो र मै जान्नेसुन्ने ठान्थे । चरम आत्मप्रशंसक थिए । आफ्ना जाली कुरालाई पनि सही ठान्थे र आफ्नो पिठ्युँमा आफैं धाप दिन्थे । धाप दिने क्रममा दुई–चार पटक उनको ढाडको नसा सड्किइसकेको छ ।
उनी सिनेमा हेर्दैनथे । साहित्य पढ्दैनथे । तर, मनोरञ्जन उनलाई पनि चाहिन्थ्यो । छिमेकीहरूलाई मूर्ख बनाएर उनी बेलाबेलामा आफ्नो मनोरञ्जनको भोक शान्त गर्थे । एकदिन उनलाई आफ्ना मूर्ख छिमेकीहरूलाई झन् मूर्ख बनाउन मन लाग्यो । उनी बजारको मध्यभागमा उभिए र कराउन थाले, ‘कागले मेरो कान लग्यो । लौ न, कागलाई समातेर मेरो कान ल्याइदेऊ !’छिमेकीहरूले रामदेवको विश्वास गरे । उनले रामदेवको कान छ कि छैन भनेर चेकजाँचै गरेनन् । तत्काल काग समात्न दौडिहाले । रामदेव सारा छिमेकीलाई आफूले कागको पछि लगाएर उल्लु बनाएको भन्दै जिल्ल परे । पेट मिचीमिची हाँसे । त्यस दिन कानको खोजीमा कागको पछिप दौडिएका छिमेकीहरू आजसम्म पनि घर फर्किएका छैनन् । उनीहरू कागको खोजीमा ब्रह्माण्डको परिक्रमा गरिरहेका छन् । रामदेवले छिमेकी नभएर खाली भएका घरमा नयाँ छिमेकी ल्याए र तिनलाई च्यवनप्रास बनाएर बिक्री गर्न थाले ।
कान : कथा दुई
एक जना रामदेव थिए । तर, सबै रामदेवहरू कहाँ चतुर हुन्छन् र ?
यी रामदेव भने साह्रै अल्छी थिए । शतप्रतिशत कामचोर थिए । आफ्ना सबै काम अरूले गरिदिऊन् र आफूले बसीबसी खान पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ थियो उनको । अरूले चपाइदिए आफूले सजिलै निल्ने थिएँ भन्ने खालको सोचाइ राख्थे । कहिल्यै स्नान गर्दैनथे । तर, उनले नुहाएको मान्छेलाई छोए मात्र पनि पवित्र भइन्छ भन्ने हल्ला टोलभरि फैलाएका थिए । समाज अल्छी रामदेवका कुरा खुबै पत्याउँथ्यो । त्यसैले कामचोर रामदेव टोलमा बहुतै सम्मानित थिए । एक दिन खाटमा बसेर ‘कोरियाना कफीगफ’ पढ्दै किताबको घनघोर चक्रव्यूहमा अल्झिएको बेलामा एउटा काग उनको छेवैमा आयो । उनलाई कागलाई धपाउन पनि अल्छी लाग्यो । काग उनको कानैनेर आयो । उनले कराएर छिमेकीलाई बोलाउँदै भने, ‘लौ न साथी हो, मेरो कानैनिर काग आयो । धपाइदिनुपर्‍यो ।’
छिमेकी आउँदासम्म कागले उनको कान लगिसकेको थियो । रामदेव रुन थाले । उनको आँखाबाट आँसु पनि अल्छी मानीमानी पुस्तकका पानाहरूमा खसेका थिए । आँसुले गर्दा कफीगफका विभिन्न प्रसंगहरू डम्म ढाडिएर झन् जटिल भएका थिए । रोइरहेका रामदेवलाई देखेर छिमेकीहरूलाई दया लाग्यो । उनीहरू रामदेवको कान फिर्ता ल्याउन कागको पछिपछि दौडिए । ती छिमेकी पनि आजसम्म कागको खोजीमा अखिल ब्रह्माण्डको फनफनी चक्कर लगाउँदै छन् । ती छिमेकी बस्ने घरहरू भूमाफियाहरूले भत्काए । मालपोतका हाकिमहरूसित मिलेमतो गरेर नयाँ पुर्जा बनाए । नयाँ कित्ताकाट गरे । जग्गाहरूको प्लटिङ गरे र त्यसमा नयाँ नेपाल बनाउन थाले ।
तृतीय कान कथा
एक जना रामदेव थिए । उनी ज्ञानी थिए । तर, उनका छिमेकीहरू उनीभन्दा पनि ज्ञानी थिए । रामदेव र छिमेकीबीच नियमित शास्त्रार्थ हुन्थ्यो । ज्ञानविज्ञानका कुराहरू हुन्थ्यो । देशविदेशका गफगाफ हुन्थे । अमेरिकाको दादागिरी र रुसको जाडोको पनि कुरा हुन्थ्यो । भारतले पाकिस्तानमाथि गरेको सर्जिकल स्ट्राइकको कुरा पनि हुन्थ्यो । चीनको वन बेल्ट, वन करिडोरको पनि चर्चा हुन्थ्यो । नेपालमा पनि जाडोकै मौसम थियो । त्यस दिन जाडो झनै बढेको थियो । रामदेव कोठैमा हिटर बालेर बडो शान्त भावमा ‘कोरियाना कफीगफ’ पढ्दै थिए । उनी पढाइमा अतिसय मग्न भएकाले बाहिर छिमेकीहरूको होहल्ला पनि थाहा पाइरहेका थिएनन् ।
छिमेकीहरूले होहल्ला गर्नुको खास कारण थियो । उनीहरूले रामदेवको घरको छतमा काग बसेको देखेर आत्तिएका थिए । उनीहरूले हेर्दाहेर्द काग भुर्रर उड्यो । उनीहरू ज्ञानी थिए । त्यसैले रामदेवको कोठामा गएर ‘रामदेवजी, कागले हजुरको कान लगेको छ कि छैन ?’ भनी सोध्न आवश्यकै ठानेनन् । उनीहरू तत्काल कागको पछि दौडिहाले । त्यो दिन रामदेवको कान खोज्न कागको पछिपछि दौडिएका छिमेकीहरू पनि आजसम्म फर्किएका छैनन् ।छिमेकीका खाली घर अचेल पतञ्जली आयुर्वेद केन्द्रको गोदाममा परिणत भएका छन् ।
कान कथा चतुर्थ
यो पनि रामदेवकै कथा हो । तर, यिनले ‘कोरियाना कफीगफ’ पढेका थिएनन् । चर्चा भने सुनेका थिए । कोरियानाले पाठकहरूबाट पाएको आलोचना र प्रशंसाले उनलाई किताब पढ्नु कि नपढ्नु भनेर अल्मल्याएको थियो । किताब कमै पढ्ने भए पनि यिनी ज्ञानी भने मानिन्थे । रामदेवका छिमेकीहरू पनि ज्ञानी थिए । तर, उनीहरूबीच आपसमा शास्त्रार्थ हुँदैनथ्यो । ज्ञानविज्ञानका कुरा पनि हुँदैनथ्यो । देशविदेशका गफगाफ पनि खासै हुँदैनथ्यो । गत चुनावमा रामदेवले बेग्लै पार्टीलाई मत दिए र छिमेकीहरूले बेग्लै पार्टीलाई । त्यस बेलादेखि उनीहरूबीच बोलचाल पनि बन्द भएको छ ।
एक दिन काग आयो र रामदेवको कान टपक्क टिपेर लग्यो । रामदेव रुँदै छिमेकीहरूलाई गुहारे ।छिमेकीहरूले रामदेवको गुहार सुने । तर, उनीहरूलाई काग समात्ने फुर्सद थिएन । किनभने उनका पार्टीका अध्यक्ष भाषण गर्न सहरमा आएका थिए । सबै त्यही आमसभामा गए ।कागको पछाडि नलागेर आमसभामा गएका छिमेकी पनि राजनीतिको जटिल ब्रह्माण्डमा अल्मलिएको अल्मलियै भए । आजसम्म घर फर्किएनन् ।रित्तो टोल अचेल व्यभिचार गर्ने अखाडा भएको छ । मुलुकको बहुचर्चित निर्मला हत्याकाण्ड यही टोलमा भएको हो ।
पाँच नम्बरको कान कथा
कथा त यो पनि रामदेवकै हो । तर, कथाहरूमा लगातार एउटै पात्र दोहरिँदा पाठकलाई नमज्जा पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले ‘रामदेव’ लाई ‘वामदेव’ गराउन सकिन्छ । अथवा, पाठक आफैंले अरू कुनै उपयुक्त नाम पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ ।वामदेवका पनि छिमेकी थिए । वामदेवका पनि कान थिए । सहरमा काग पनि प्रशस्तै थिए । यी वामदेव भने कुनै आमसभामा जाँदैनथे । त्यसैले लप्पनछप्पनमा खासै अल्झिएका थिएनन् । आफ्नो काममा मात्र ध्यान दिन्थे । विदेशी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेर आएका थिए । त्यसैले अरूको चियोचर्चोमा समय खेर फाल्दैनथे । अरूका बकम्फुस्से गफ पनि सुनेर बस्दैनथे । बरु फुर्सदका बखत कानमा इयरफोन कोचेर रविशंकरको ‘आर्ट अफ लिभिङ’ का प्रवचनहरू सुनेर बसिरहन्थे ।
छिमेकी भने चतुर थिए । धेरै पटक कागको फुल पनि चोरिसकेका थिए । उनीहरू आफूलाई चतुर र वामदेवलाई मूर्ख ठान्थे । एक दिन ती सहृदयी छिमेकीहरूले वामदेवको घरको छतमा बसेर एउटा काग निरन्तर कराइरहेको देखे । उनीहरू वामदेवको घरमा आए र भने, ‘हजुरको त कान कागले लगेछ नि ।’ वामदेवले कानबाट इयरफोन हटाएर अचम्म मान्दै सोधे, ‘ए हो र ? मेरो कान कागले लगेछ ?’ उनी निराश भए र फत्फताए, ‘नेपालका कागहरू दुष्ट रहेछन् । यो देशमा केही गर्ने वातावरणै छैन ।’ उनी फेरि पोस्ट डक्टरेट गर्न विदेशी विश्वविद्यालयतिर लागे ।
उनी विदेशी विश्वविद्यालयबाट आजसम्म फर्किएनन् । उनी ज्ञानको अथाह ब्रह्माण्डमा रुमल्लिरहे । पछिल्लो समय उनी बृहस्पति ग्रहको छेउछाउ देखिएका थिए । उनी त्यतिबेला वैज्ञानिकहरूको एक समूहको नेतृत्व गर्दै मंगलग्रहमा मेलम्ची खोज्न जाँदै थिए । वामदेवको रित्तो घरमा अचेल गोरक्षा केन्द्र खुलेको छ । केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्रीले गोमूत्र सेवन गरी यो गोरक्षा केन्द्रको उद्घाटन गरेका थिए । त्यही दिनदेखि प्रधानमन्त्रीका आलोचकहरूले भन्न थाले, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीको दिमागमा गोबर भरिएको छ ।’ रेल र पानीजहाजको सपना देखाउने सोझासाझा प्रधानमन्त्रीको मजाक उडाएको यो कथाकारलाई भने पटक्कै मन परेको छैन । फ्रायडलाई पनि मन परेको छैन ।
कान कथा नम्बर छ
पात्र उही हुन् । उही रामदेव या उही वामदेव । लवाइखवाइ, लवज, आनीबानी सबै उही । छिमेकी पनि उस्तै हुन् । उही हुन् । उस्तै लवाइखवाइ, उस्तै लवज र उस्तै आनीबानीका छिमेकी ।
एक दिन रामदेवको घरमा उसै गरी एउटा काग देखियो ।
छिमेकीहरूले हल्ला गरे, ‘कागले रामदेवको कान लग्यो ।’
कान नछामीकनै रामदेव पनि कराउन थाले, ‘कागले मेरो कान लग्यो ।’
सबै छिमेकी र रामदेव कानको खोजीमा कागको पछिपछि ब्रह्माण्डतिर उडे । यही मौकामा रित्तो भएको टोलमा सरकारले पानीजहाजको कार्यालय खोल्यो ।
सातौं कान कथा
अब नाम फेर्न के आवश्यक ! छिमेकी पनि फेर्नु के आवश्यक ! कथामा रामदेव र छिमेकी आफ्नो पहिचान, हुलिया र आनीबानीसहित स्थापित भइसके । स्थापित भइसेकका पात्रलाई फेरेर फेरि नयाँ पात्र स्थापित गर्नु उचित पनि हुन्न । पाठकलाई अलमल हुन्छ । पाठकलाई अलमलमा पारेर आजसम्म कुनै सामाजिक यथार्थवादी कथा चर्चित भएको छैन । त्यसैले यो कथामा त्यो खतरा मोल्नु उचित नहोला भन्ने यो पंक्तिकारको ठहर छ ।
उही रामदेव । उही छिमेकी र काग पनि उही ।
तर, यस पटक रामदेवले ‘कोरियाना कफीगफ’ पढिरहेका आफ्ना सबै छिमेकीको घरको छानामा काग बसिरहेको देखे । रामदेवले हल्ला गरे, ‘तपाईंहरूको घरमा बसेको कागले तपाईंहरू सबैको कान लग्यो ।’
रामदेवको कुरा सुनेर आत्तिए छिमेकीहरू । उनीहरू आफ्नो कान छाम्नतिर लाग्दै लागेनन् । बरु हतारहतार सबै कागकै पछि दगुरे ।
आआफ्नो कान खोज्न गएका छिमेकीहरू फर्किएर नआएपछि रामदेवले तिनका घरको नयाँ लालपुर्जा बनाए । सरकारलाई ती सबै घर बेचे ।
सरकारले ती सबै घर भत्काएर त्यो एरियामा विशाल भ्युटावर बनायो । त्यो विशाल भ्युटावरबाट पूरै नेपाल देखिन थाल्यो । सगरमाथा र लुम्बिनी पनि देखिन थाल्यो । सिंहदरबार, बालुवाटार र पुल्चोक पनि देखिन थाल्यो ।
अचेल एउटा काग त्यही भ्युटावरमाथि बस्छ ।
रामदेव कानै नभएका नयाँ छिमेकीहरूलाई त्यही टावरमुनि अनुलोमविलोम र कपालभाँति सिकाइरहन्छन् ।
‘कानसँगै मान्छेको विवेक पनि हराउँदो रहेछ ।’
यो कुरा कि रामदेवलाई थाहा छ कि यो कथाका पाठकहरूलाई । लेखकलाई भने थाहा छैन । किनभने कथाबाट लेखक उहिल्यै गायब भइसकेको छ ।
कान : अन्तिम कथा
कागहरू कथामा आफ्नो भूमिकाप्रति आक्रोशमा थिए ।
‘के हामी कागहरूलाई सधैं खलनायक बनाउनु जरुरी छ ? यो महेन्द्रीय राष्ट्रवाद हो । यसले हाम्रो पहिचान र अस्मितामाथि धावा बोलेको छ ।’
एक दिन सारा कागहरू भेला भए । छलफल गरे । उनीहरू उड्दैउड्दै बस्तीमा पुगे । त्यतिबेला रामदेव र सारा छिमेकी गहिरो निद्रामा थिए ।
कागहरूले उनीहरूले थाहै नपाउने गरी सबैका कान टिपेर उडे ।
अल्छी मान्दै ब्युँझिए रामदेव र वामदेवहरू । सबैले सबैको अनुहारतिर हेरे ।
तर, रोचक र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, आजसम्म कसैले पनि कागले आफ्नो कान लगेको थाहा पाएका छैनन् । सब व्यस्त छन् । सब मस्त छन् ।
‘कागलाई घरको कौसीमा बस्न दिनु हुन्न र हामी सबैले बेलाबेलामा आफ्नो कान छामिरहनुपर्छ ।’
यो कथाले दिन खोजेको नैतिक शिक्षा यही हो । किनभने कागले कुनै बेला पनि हाम्रो कान लैजान सक्छ ।
सहरमा ‘कोरियाना कफीगफ’ का पाठकहरूले अचेल यही कथा पढ्न थालेका छन् । कथा हिट भएको छ । तर, भर्खर कागको पछिपछि दौडिएर रित्तो हात फर्किएको एउटा डाइनोसोरको जमात भने भन्दै छ— मार्क्स अब अप्रासंगिक भइसके र सामाजिक यथार्थवादले नेपाली साहित्यलाई बर्बाद गरेको छ ।
डार्बिनलाई भने थाहा छ— डाइनोसोरहरू लोप हुन्छन् र कागहरू रहिरहन्छन् ।
प्रकाशित : चैत्र २, २०७५ १२:२९